बिषादीयुक्त तरकारीले स्वास्थ्यमा जोखिम - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ बिषादीयुक्त तरकारीले स्वास्थ्यमा जोखिम
बिषादीयुक्त तरकारीले स्वास्थ्यमा जोखिम
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७६ असार २४ गते, १२:४९ मा प्रकाशित
काठमाडौं— स्वदेशमा उत्पादन हुने तथा आयात गरिएका तरकारी एवं फलफूलमा विषादीरहित अवस्था सुनिश्चित गराउन नेपाल चिकित्सक संघले ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।
आयात गरिने तरकारी, फलफुल एवं खाद्यान्नको सीमा नाकामा विषादी जाँच नगरी निर्वाध रुपमा आयात गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको निर्णयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए ।
विषादीयुक्त तरकारी एवं फलफूलको सेवनले तत्काल र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या ल्याउने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए । डा. श्रेष्ठका अनुसार, तत्कालै पेट एवं छालाजन्य समस्या देखा परेपछि दीर्घकालीन रुपमा मुुटु, फोक्सो र मिर्गौलामा क्षति पुग्छ ।
गुणस्तरीय वस्तु एवं सेवा पाउने उपभोक्ताको हक भएको उल्लेख गर्दै चिकित्सक संघले विषादीयुक्त तरकारी, फलफूलको सेवनले पार्ने स्वास्थ्य असरबारे सु–सूचित गराउने भएको छ । संघका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले मंगलबार छलफल गरी जनस्वास्थ्यका दृष्टिले आम नागरिकलाई सु–सूचित गराउने जानकारी दिए ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विषादीका कारण सिर्जना हुने मानवीय तथा वातावरणीय क्षति रोक्नु सरकारको दायित्व भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमन, विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको अध्ययन, अनुसन्धानबाट नेपालमा तरकारी उत्पादनमा विषादीको प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, अन्य मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूललगायतका उपभोग्य वस्तुहरुमा विषादीको मात्रा र अवस्थाको जाँच नै नगरी निर्वाध रुपमा आयात हुने गरेको छ । यसबाट आम उपभोक्ता, विषादी प्रयोगकर्ता किसान तथा कामदार, नीति निर्माताहरु समेतको गम्भीर असर पर्ने आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।